ကလေးတွေမှာ ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခြင်း - Hello Sayarwon
Nadi မှ ရေးသားသည်။ 04/06/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ယခုအခါ ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခြင်းသည် ကလေးအတွက် ပြင်းထန်သောပြဿနာဖြစ်သည်။ ပုံမှန် သင့်ဦးနှောက်သင်္ကေတများ ရယူခြင်းပြန်ပို့ခြင်း မကောင်းသောအခါတွင်ဖြစ်သည်။ ထိုမကောင်းမှုက ဦးနှောက် ထိခိုက် လှုပ်ဆောင်မှုမူမမှန်ခြင်းစသည့် အကြောင်းများစွာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အရေးကြီးသောအကြောင်းမှာ မိဘတိုင်း ကလေးတွင်ဖြစ်နိုင်သော စိတ်ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်။
ဖျားခြင်း၊ အဆိပ်တတ်ခြင်းနှင့် အခြားမကောင်းသည့်အချိန်တွင် ဖြစ်သောအလွန် စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသည့်အခြေအနေဖြစ်ပြီး ဂနာမငြိမ်ခြင်း၊ အထင်မှားခြင်း၊အတွေးအပြောများမထိန်းနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအရာကို ရုတ်ချည်းဖြစ်သော စိတ်ရှုပ်ထွေးသောကာလဟုခေါ်သည်။
ဖြစ်စေသော ရောဂါသို့မဟုတ် နေမကောင်းခြင်းက ပြင်းထန်သော စိတ်ကယောင်ကခြားဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ဆေးအသုံးများခြင်းကလည်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အခြားသောဖြစ်စေသည့်အရာ ဥပမာ အဖျားကြီးခြင်း၊ ခေါင်းထိခြင်း၊ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အဆိပ်မိခြင်း၊ အိပ်ရာထချိန်မှားခြင်းတို့က ကလေးတွင် စိတ်ကယောင်ကတမ်းဖြစ်စေသည်။
အချို့သော လက္ခဏာများက စိတ်ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခြင်းတွင် အဖြစ်များပြီး အချို့လက္ခဏာများက စိတ်ကယောင်ကတမ်းဖြစ်သည်ဆိုသောလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ထိုအရာများတွင် စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ သူတို့ဘယ်မှာမှန်းမသိခြင်း၊ ဘယ်ရက်မှန်းမသိခြင်း၊ ဘယ်သူနှင့်ရှိနေမှန်း၊ ဘာလို့ရှိနေမှန်း မသိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်မရှည်ခြင်း၊ ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်းတို့ ဖြစ်လွယ်သည်။ ထိုနေရာတွင် ရှိမနေသော ပစ္စည်းကိုကောက်နေနိုင်သည်။ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ချော့လို့မရခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်အာရုံမစူးစိုက်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ လန်းလန်းဆန်းဆန်းနေရန်လည်း ခက်ခဲနေနိုင်သည်။
အခြားလက္ခဏာများ (ဥပမာ အိပ်မပျော်ခြင်း)၊ အသစ်သောပုံစံများ (ဥပမာ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ သံသယများခြင်း သို့မဟုတ် ပြောနေသောစကားများက အဓိပ္ပာယ်မရှိခြင်း၊ မရှိသောအရာများကိုကြားနေခြင်း၊ မြင်နေခြင်း) စသည်တို့ဖြစ်နိုင်သည်။
စိတ်ကယောင်ကတမ်းဖြစ်နေသော ကလေးကို သင်ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲ။
ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူကို စောင့်နေချိန်တွင် သင့်ကလေးသက်တောင့်သက်သာရှိရန် သင်လုပ်ပေးနိုင်သောအရာများရှိပါသည်။ ပထမအနေနှင့် ခုတင်နားတွင် ကလေးအားစိတ်ငြိမ်အောင်ကူပေးပါ။ သူတို့ဘယ်မှာ၊ ဘယ်အချိန်ရှိပြီကို တဖြည်းဖြည်းချင်း သတိရအောင်လုပ်ပေးပါ။ သူရင်းနှီးသောပစ္စည်းများ (ဥပမာ သူကြိုက်သောခေါင်းအုံး၊ မိသားစုပုံ၊ သက်တောင့်သက်သာရှိသောသီချင်းများ)ထားပေးပါ။ စိတ်ရှုပ်နေသော ကလေးနှင့်ရန်မဖြစ်ပါနှင့်။ သင့်ကလေးပျော်ရွင်သော အတွေးများဖြင့်ထားပါ။ စိတ်တိုနေသောအချိန် ကလေးအား လုံခြုံအောင်ထားရန်အရေးကြီးသည်။ သင့်မိဘက သင့်ကလေးအားခုတင်မှထွက်ရန် အားပေးနိုင်သည်။ သင်ကလေးတွင်မေးခွန်းရှိပါက စိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးက ဝမ်းနည်းနေသေးပါက သင်ကလေးကိုပြန်ရှင်းရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
ဖြစ်စေသောအကြောင်းကို ကုသပြီးက ပိုကောင်းလာနိုင်သည်။ သင့်ကလေးက မြန်မြန်ပြန်ကောင်းလာလျှင် ရက်မှ အပတ်အတန်ကြာထိကြာနိုင်သည်။
သင့်ကလေးကဘာဖြစ်မှန်းသိမည်မဟုတ်ပါ။ အဓိကအားဖြင့် သူအရင်က မှတ်ဉာဏ်ပြဿနာများရှိဖူးပါက ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် သင်ကလေးကမပျော်ဘဲ မကောင်းသောအတိတ်ကိုပြန်တွေးနေခြင်း၊ သင်စိတ်ဆိုးမှာကိုတွေးပူနေခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာဖြစ်သွားလဲကို ရှင်းပြနိုင်သော သူတစ်ယောက်နှင့်စကားပြောနိုင်ပါက ပိုကောင်းသည်။ ထိုသူက သင့်မိသားစု ဂရုစိုက်ပေးသူ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ဖြစ်နိုင်သည်။ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းဖြင့် မှတ်နိုင်သည်။ ဘာလို့ဖြစ်လဲ ဘာဖြစ်သွားလဲသိပြီးလျှင် များသောအားဖြင့် လူအများက စိတ်သက်သာသွားတတ်သည်။
စိတ်ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခြင်း ပိုသက်သာသလား နားလည်ရန် အချက်အလက်များဖတ်ခြင်း၊ ညွန်ကြားချက်များနားထောင်ခြင်းလုပ်သင့်သည်။ အခြေအနေပိုဆိုးလာပါကဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးကုသသူကိုပြသတိုင်ပင်ရန်လိုအပ်သည်။
Delirium: prevention, diagnosis and management.https://www.nice.org.uk/guidance/cg103. Accessed August 21, 2016.
Delirium.http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/delirium/basics/definition/con-20033982. Accessed August 21, 2016
Be alert to delirium in pediatric patients.https://consultqd.clevelandclinic.org/2015/06/be-alert-to-delirium-in-pediatric-patients/. Accessed August 21, 2016.
Common causes of delirium in children.http://www.rightdiagnosis.com/symptoms/delirium_in_children/common.htm. Accessed August 21, 2016.
Delirium in children and adolescents.http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Delirium-in-Children-and-Adolescents-120.aspx. Accessed August 21, 2016.